Global Voices teny Malagasy » @ActLenguas : Elias Ajata sy ny tolony hamantarana ny aymara amin’ny aterineto, ny 6 ka hatramin’ny 12 mey 2019 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Mey 2019 6:00 GMT 1	 · Mpanoratra Luis Flores Martínez Nandika (fr) i Annick Battesti, Andriamifidisoa Zo
Sary nomen'i Elias Ajata
Mandritra izao taona 2019 izao izahay manasa olona maro hifandimby hitantana  ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihana ara-piteny) sy hizara ny niainan-dry zareo tamin'ny famelomana indray sy tamin'ny fampiroboroboana ny fitenin-drazan-dry zareo. Miresaka momba an'i Elias Ajata (@ELIASREYNALDO ) ity lahatsoratra ity sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano azy.
Elias Ajata no anarako, Aymara teraka tany altiplano de La Paz aho. Amin'izao fotoana izao aho mandray anjara amin'ny fanomezana aina indray ny aymara izay tenindrazako. Iray amin'ny tanjoko ny manao izay hisiany an'aterineto ahitana votoaty maro sy isan-karazany. Mba hahatrarana izany dia nataoko izay ahafantarana ahy amin'ny tranonkala maro (tambajotra sosialy, bilaogy, sehatra am-peo, pejy fanentanana, sns.) ary any no hamoronako sary-sy-soratra, lahatsary sy horonam-peo natao ampianarana ny fiteny amin'ny olona tsy miteny azy, eny fa na dia amin'ireo tsy mahay manoratra aza.
RV: manao ahoana ary ny fiteninareo an-tserasera sy andavanandro?
Mandroso tokoa ny aymara amin'ny aterineto ary mitombo tokoa ny isan'ny olona maniry ny hianatra azy tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Taona maromaro lasa izay, raha nanomboka nampiely votoaty tamin'ny tambajotra sosialy izahay, vitsy ny pejy tamin'izany, fa feno sy betsaka izany ankehitriny, ary vokatr'izay, efa manomboka mifantina amin'izay ny olona. Izany hoe tsy mi-“like” intsony ry zareo satria hoe teny aymara io araka ny fanaony taloha, fa efa mitady kalitao ry zareo amin'izao fotoana izao. Ankoatra izany, tsikaritra fa mitady fampiasa vaovao ry zareo, mitady endrika famoahana vaovao, teknika vaovao sy fitaovana vaovao, izay manery ny admin any amin'ireo habaka isankarazany handray fijery vaovao sy ahafaha-mamoron-javatra. Ary asehon'ny fironana fa mbola ho tsara kokoa ny fiantraikany ao anatin'ny taona vitsivitsy.
Raha ivelan'ny aterineto indray dia mihena ny isan'ny mpiteny aymara, saingy tsy mampanahy loatra raha oharina amin'ny fiteny hafa. Efa miova ny fijerin'ireo tsy Aymaras raha oharina tamin'izay nitranga dimy taona lasa izay. Nanjaka ny teny fanilikilihana tamin'izany fotoana izany, fa ankehitriny kosa, noho ny antony maro ara-politika sy ara-piarahamonina, efa tononina ankarihary ny fampiasana ny fiteny aymara any amin'ireo sehatra politika any ambony any. Noho ny fisian'ny teknolojia vaovao, babon'ny endrika fampianarana fiteny aymara amin'io endrika io ny tanora, nefa efa manaiky ny lahatra ny olona voky andro ary mihevitra fa tsy maintsy hanjavona ihany ny fiteny aymara, nefa tsy marina izany.
RV: Lohahevitra manao ahoana no kasainao ifantohana mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter @ActLenguas?
Tsy maintsy lazaina ireo singa anatiny sy ivelany miantraika amin'ny fiteninay (resaka, hetsika, teoria sy fihetsika). Ankoatra izany dia holazaiko izay natao mba ho fitenin'aterineto ny aymara.
RV : Inona no mahatonga anao havitrika amin'ny fiteny aymara ? Inona ny fanantenanao sy ny nofinofinao ho amin'ny fiteninareo?
Amin'ny ankapobeny, manao izay hahazoan'ny aymara vahana bebe kokoa hahatonga azy ho fitaovam-pifandraisana, mba hitombo ny isan'ny mpiteny aminy ary hianatra azy ny taranaka vaovao. Tsy tokony ho any an-trano ihany no ampiasaina ny tenintsika, fitaovam-pampitam-pahalalàna rehetra ireny ary nofinofiko mba hahazo izany sata izany ny fiteny ampiasaiko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/09/138504/
 manasa olona maro hifandimby hitantana: https://rising.globalvoices.org/campaigns/twitter-actlenguas-2019